Qaababka Loosoo Jiido Gabdhaha waqtiga Barashada iyo Shukaansiga. - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
Home → jaceyl → qooyska
→ Qaababka Loosoo Jiido Gabdhaha waqtiga Barashada iyo Shukaansiga.
Qaababka Loosoo Jiido Gabdhaha waqtiga Barashada iyo Shukaansiga.
iftineducation.com - Inta badan Gabdhuhu waa kuwa kala dabeecad duwan kala dhaqan duwan kalana aragti duwan wayna kala fududahay inaad Gabadh-ba si usoo jiidataa , Hadaba Shabakada iftineducation.com ayaa ku siineeysa qodobadaan.
Kaftan Badane : Gabdhuhu way ka helaan ragga marka ay barasha wadaaga yihiin aad u kaftama u qosla oo u dhoola cadeeya , waxay saameen ku yeelataa marka ay gurigeeda tagto Shan mar oo kamid ah waqtigeeda nasiinada waxay ku fakaraysaa ineey xariir kula yeelato hana ku dag dagin inaad adigu ka dalbatid xariir.